Izindinganiso zokuziphatha - yezimbangela eliyisisekelo lokuthi yabeka isisekelo sesimiso somthetho normative yezenzo womuntu. Lo mqondo ihlanganisa zonke izindawo futhi imikhakha yokuphila komuntu, ukubukwa isimilo, noma izimiso, kubalulekile izimpawu zendawo imizwa. Ukuziphatha ulawula izenzo nezimo zengqondo zabantu, kunomahluko ocacile phakathi kokuhle nokubi, ehlukanisa udumo ekuhlazisweni, unembeza - kusukela ukungezwakali kwawo. Izindinganiso zokuziphatha zihlanganisa webulungisa / ukungabi nabulungisa, ubudlova, esiza abantulayo, nokunye.
Ngaphandle kwezindinganiso zokuziphatha olulodwa akukwazi ukuphila ingxabano-free emphakathini, njengoba zindinganiso kuphela bayakwazi ukulungisa isenzo umuntu noma kuzwe lonke.
Amanani inethonya intando yomuntu. Iphuzu liwukuthi hhayi ukuthi umuntu ngamunye ukhululekile ukuba azinqumele noma cha yithathe ngokubona kwabo. Iphuzu liwukuthi hhayi ukuthi izimiso zokuziphatha kungaba nenzuzo noma disadvantageous. Ukulandela olwamukelwa izimiso zokuhle - nejoka noma yimuphi umuntu. ukuziphatha angathembekile, kugwenywe izikweletu zithathwa njengeziNdawo ezingamaGugu ukulahlekelwa morale, okuholela ukulahlwa umphakathi, isihlamba unembeza wakhe.
Abantu abangenalukholo abanazo unembeza, enqabe zokuziphatha ezibhekwa zokuziphatha okubi.
Uma unembeza womuntu ngeke enze imisebenzi zokulawulwa kwangaphakathi, uma umuntu akanayo imihlahlandlela kwangekhatsi, oziphethe kabi. Ababi umuntu ofanayo uyakwazi balimaze kuphela.
Ayanda izimiso zokuziphatha okufanayo ngaso sonke isikhathi, ngoba zonke izizwe. Nokuhlonipha asebekhulile, umhlatshelo sabazali, ukuhlonipha abazali, anakekele buthaka futhi buthakathaka ngokwengeziwe - lezi postulates kuyisisekelo sesihlalo Ukuphila kwanoma imuphi umphakathi, kungaba isizwe elincane labantu noma ukuthuthukiswa komnotho.
I zokuziphatha amagugu yomuntu akazange avele Umoya-mpilo omncane, basuke nje isuke ibangelwa isifiso ukuze usinde, ukunweba umndeni wakhe, ukushiya inzalo. Yingakho zonke izizwe duty abesifazane - atjheje, "ukuqinisekisa labaqaphi elingemuva." Owesifazane phakathi kwabo bonke abantu kuyinto lwenhlanzeko, ukuhlakanipha, ukwethembeka futhi unembeza. Indoda kufanele ibe umondli Umholi, umuntu obangela enhlalakahleni yomkhaya. Kwaba ekusindeni izingane kumelwe ulalele umbono womzali, ukufunda kulokho okwenzeka kuwo.
Nge ekukhuleni komphakathi amagugu zokuziphatha Ushintshe, hhayi njalo isiqondiso esihle. Namuhla, lapho abesifazane akusadingeki njalo silondoloze ongacimekiyo umlilo eziko, futhi amadoda akudingeki athole ukudla ngokoqobo, iqala ukushintsha engamukelekile emphakathini. Abesifazane abaqashiwe okuqukethwe umkhaya ungase unake kancane bekhulisa izingane. amadoda Bayanda esabe ancintisane abesifazane enamandla, ukuphuza ngokweqile.
Esinye isibonelo yokushintsha kwezindinganiso zokuziphatha ngekuhamba kwesikhatsi okuhlobene ubuthina. Ngisho eRussia wethu unazo emashumini eminyaka adlule, inkinga nobumsulwa nobumsulwa likamakoti ithinta hhayi kuphela umndeni, kwathiwa kulawulwa umphakathi. Eminyakeni eyikhulu edlule, kukholakala ukuthi umkakhe, wangena emshadweni limi ngomumo, asikwazanga azixoshwanga endlini yomyeni wakhe. It kuqinisa umndeni. Namuhla ubuntombi akuyona ehola value zokuziphatha. Njengohulumeni emazweni anezimboni kakhulu, ezibhekwa imishado umthetho ezivamile, ubone nendlela yi zabo - lenqwaba omama abangabodwa, imikhaya eziphukile.
Imiqondo okuhle nokubi manje ngokuya Limiselelwe imiqondo kwenzuzo engenayo. Ngemuva zivame ukufiphala unembeza mutual, uzwela. Lo mlando akuyona eyokuqala, ngakho eyaziwa kahle: uhulumeni ilahlekelwe zokuziphatha, uyafa.
Izindinganiso zokuziphatha, izimiso zokuziphatha, izindinganiso zokuziphatha nezindaba - ke kuwuhlobo iyoke. Akha umsebenzi womphakathi lwelungu kunoma yimuphi umphakathi ngamunye. ukuzithiba Zokuziphatha kuzibonakalisa ikhono lomuntu uqobo ukulawula indlela aziphatha ngayo siqu, ukuhlola izenzo.
Vietnam ehhotela ukubuyekezwa, ezikhangayo
Lapha uzothola isifinyezo sezinto "The Bear" Turgenev
Ibhokisi Yenziwe ingcina itheyiphu itolitji: Master Class
Kuyini i-tablet kanye nokwenza imisebenzi yayo. I-Tablet nge cell phone, e-book